LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Olona telo nitondra môtô sy bisikileta maty tsy tra-drano
Lehilahy roa samy nitondra môtô sy tovolahy iray nitondra bisikileta no maty tsy tra-drano vokatry ny fandehanana mafy nataon’izy ireo, tao amin’ny Distrika telo samy hafa no nisehan’izany. 19 avril 2017
Ny voalohany izay nitranga tao amin’ny Fokontany Ambavarano, Kaominina sy Distrikan’Ambohidratrimo. Môtô scooter iray avy any Mahitsy hiakatra aty Antananarivo, no nianjera rehefa nahazo fiolahana ary nifatratra tany ambany ny fiara Super goelette, izay nifanena taminy. Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô. Nosokafana ny fanadihadiana mikasika io lozam-pifamoivoizana voalohany io.
Faharoa izay niseho, dia lehilahy iray no nitondra môtô ihany koa no nianjera teo afovoan’ny arabe. Tao amin’ny Fokontany Ambahabe Centre ville, Distrikan’i Farafangana no nisehoan’io lozam-pifamoivoizana faharoa io, ny sabotsy lasa teo, tokony ho tamin’ny efatra ora hariva. Voalaza fa tsy nanao aroloha ny mpamily tamin’io fotoana io.
Nentina tany amin’ny hôpitaly tao Farafangana ilay naratra saingy tsy tana ny ainy rehefa tonga tany. Nomena ny fianakaviana ny razana taorian’ny fitsirihana nataon’ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana. Efa mandeha ihany koa ny famotorana momba io loza io.
Loza fahatelo izay niseho tao amin’ny Fokontany Vatolahy, Kaominina Ambohimanarivo, Distrikan’Antsirabe. Lehilahy roa nanao taingin-droa tamin’ny bisikileta no tra-doza, raha nidona tamin’ny taksibe ny bisikileta nentin’izy ireo.
Ny sabotsy lasa teo no nisehoan’izany, tokony ho tamin’ny iray ora folakandro, tao anaty fiolahana. Samy naratra mafy izy roa lahy, ka nentina tany amin’ny Csb2 tao an-
toerana, saingy namoy ny ainy teny an-dalana ny iray.
Mbola manaraka fitsaboana kosa ilay naratra. Nomena ny fianakaviana
ny maty taorian’ny fitsirihana nataon’ny dokotera sy ny mpitandro ny filaminana. Notazonina natao famotorana kosa ilay mpamily taksibe.